KYAW CHAN NYEIN: Emotion Management & Mindful Compassion တရားပွဲသင်တန်း (Part 1 - E)
Emotion Management & Mindful Compassion တရားပွဲသင်တန်း (Part 1 - E)
🔯 ဒီ auto mind (အော်တို ဖြစ်နေတဲ့စိတ်) ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မှာလဲ။ ဘယ်လို manage လုပ်မှာလဲ။
★ ဒါကတော့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် non-judgmental awareness ။ awareness ဆိုတာ သတိပါပဲ။ ဒီ သတိက ဘယ်လိုသတိလဲဆိုရင် non-judgmental. အကောင်းအဆိုး မဝေဖန်တဲ့သတိ။
★ အရာတစ်ခုခုကို သတိဖြစ်လာတယ်၊ ကိုယ့်ရှေ့မှာ လူတစ်ယောက်ယောက် ရှိနေတယ်လို့ သတိဖြစ်လာပါတယ်၊
● သူကတော့ အထက်နဲ့ အောက် ၀တ်ထားတာ ဘယ်လိုမှန်းလဲ မသိဘူးဆို စိတ်က ချက်ချင်းသွားပြီးတော့ comment ပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်။
အဲ့ဒါကို judgmental mind လို့ ခေါ်တယ်။ အလိုလိုနေရင်းနဲ့ ဖြစ်တာ။
★ အဲ့ဒီ judgmental mind က auto mind ပဲ။ ခဏခဏပြောခဲ့တဲ့ အော်တိုစိတ်ပဲ။ အဲ့ဒီ စိတ်က အရာရာတိုင်းကို မလိုအပ်ဘဲနဲ့ judge လုပ်တယ်တဲ့။ ဝေဖန်တယ်။
★တခါတခါ လူကြားထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာ လူတွေကို မကြိုက်တဲ့စိတ်၊ ဘယ်အချိန်ပေါ်မှန်း မသိဘူး။ သတိရတဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီ စိတ်က တော်တော်လေး အားကောင်းလာတယ်။ ဒါတွေဟာ judgmental mind ရဲ့ အလုပ်တွေပေါ့။ Function တွေပေါ့။
🔯 ဒါ့ကြောင့် non-judgmental awareness ဆိုတာ "အကောင်းအဆိုး မဝေမဖန်နဲ့။" သတိတရားတွေပဲ။
● စိတ်ထဲမှာ ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒေါသဖြစ်နေတယ်။
★အဲ့ဒီ ဒေါသကို အကောင်းအဆိုး သွားပြီးတော့ မဝေဖန်နဲ့။ ဒေါသဖြစ်တာ မကောင်းဘူးဆိုပြီး သွားမပြောနဲ့။
★☆ တရားထိုင်နေရင်းနဲ့ စိတ်ထဲမှာ မျက်စိထဲမှာ ပုံပေါ်လာရင် မြင်တယ်လို့ပဲ မှတ်လိုက်ပါတဲ့။ ကောင်းတယ်ဆိုပြီး မဝေဖန်ပါနဲ့တဲ့။
ဘာဖြစ်လို့တုန်း။ အဲ့ဒီ judgmental mind အကောင်းအဆိုး automatic ဝေဖန်နေတဲ့စိတ်ကို သိချင်လို့ သူ့ကို manage လုပ်လို့ရအောင်၊ စီမံလို့ရအောင်ဆိုရင် ဘယ်ကနေစရမလဲ ?
★ ဒီကနေ စရမယ်။ အကောင်းအဆိုး မဝေဖန်နဲ့။ awareness/ mindfulness သတိတရား။
★ သတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာ ဝေဒနာနုပဿနာကို
မြတ်စွာဘုရားဟောတာက သုခဝေဒနာဆိုရင် "သုခဝေဒနာ" လို့ပဲ မှတ်လိုက်၊ သိလိုက်။
● ဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင် "ဒုက္ခဝေဒနာ"
★ "ဒုက္ခဝေဒနာ မကောင်းဘူးဟေ့" ဆိုပြီးတော့ "Value Add Judgment" ထပ်ပြီးတော့ အကောင်းအဆိုး၊ တန်ဖိုး ထည့်မပေးပါနဲ့တဲ့။
★ စိတ္တာနုပဿနာထဲမှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ သတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာ မြတ်စွာဘုရားက
● ဒီစိတ်က ဒေါသမဖြစ်ဘူး။
● လိုချင်တဲ့စိတ်လည်း "လိုချင်တဲ့စိတ်လေး" ပေါ်နေတယ်လို့ အဲ့လိုလေးသိရမယ်။
● လိုချင်တဲ့စိတ် မရှိဘူးဆိုရင်
လိုချင်တဲ့စိတ် မရှိဘူးလို့ သိလိုက်။
● irritated ဖြစ်နေတယ်။ စိတ်ထဲမှာ မကြိုက်တာတွေဖြစ်နေတယ်။
● စိတ်ထဲမှာ အနှောက်အယှက် ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် "အနှောက်အယှက် ဖြစ်နေတယ်" လို့ အဲ့ဒါလေးကို လိုက်ပြီးတော့ သိလိုက်။
Posted by KYAW CHAN NYEIN at 8:03 PM